Sacuudiga oo aad uga cadhooday gubidda kitaabka Quraanka ee Sweden |
Sacuudiga oo aad uga cadhooday gubidda kitaabka Quraanka ee Sweden
Nairobi(GNN):-Sacuudi Carabiya ayaa aad uga cadhootay wararka sheegaya in si ula kac ah Qur’aanka loogu gubayo Sweden. Sida wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ay ku xustay bayaan ay saakay soo saartay.
Wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa bayaankeeda waxay ku tiri, “Wasaaradda arrimaha dibadda waxay gudbineysaa cambaareynta Sacuudi Carabiya ee ku aaddan tacaddiga iyo daandaansiga Muslimiinta.”
Bayaanka ayaa intaa ku daraya, “Sacuudi Carabiya wuxuu xoojinayaa muhiimadda dadaallada lagu dardar gelinayo wada xaajoodka, dulqaadka iyo wada noolaanshaha. Iyo sidoo kale baabi’inta nacaybka, xagjirnimada iyo tacaddiyada dhammaan diimaha iyo goobaha barakeysan.”
Sidee ayay wax u dhaceen?
Isku dhacyo ayaa maalintii afaraad ka socda magaalooyin badan oo ku yaala dalka Sweden, waxaana rabshadaha ay ka dhasheen isku-day ay Kitaabka Quraanka ku gubayaan koox ka soo horjeeda soo galootiga oo uu hor kacayo cunsuri u dhashay dalka Denmark oo lagu magacaabo Rasmus Paludan.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in saddex qof ay ku dhaawacmeen magaalada bari ee Norrköping Axaddii ka dib markii booliska ay rasaas digniin ah ku rideen dibadbaxayaasha.
Dhowr baabuur ayaa lagu gubay ugu yaraan 17 qofna waa la xiray.
Sabtidii, baabuur uu ku jiro bas ayaa lagu gubay koonfurta magaalada Malmo oo ay ka socdeen isu soo bax ay dhigayeen kooxda midigta fog.
Ficilladiisa ayaa waxay ay horseedday in dowladaha Iran iyo Ciraaq ay u yeereen wakiilada Sweden si ay uga dhiidhiyaan gubidda nuqulada kitaabka Qur’aanka ah.
Muslimiinta Sweden ayaa booliska dalkaas ku eedeeyay inay Paludan u oggolaadeen falka ka caraysiiyay qowmiyadooda, oo loo baahnaa inay ka joojiyaan.
Rasmus Paludan, oo sidoo kale haysta dhalashada Sweden oo hoggaamiya dhaqdhaqaaqa Stram Kurs, ama Hard Line, ayaa sheegay in uu gubay kitaabka ugu xurmada badan Islaamka uuna ku celin doono ficilkaas.
Paludan oo sidoo kale haysta dhalashada Sweden ayaa sanadkii 2019 ku ciyaaray Kitaab Quraan xilli uu ku sugnaa xaafadda Nørrebro ee caasimadda dalka Denmark ee Copenhagen.
Ugu yaraan 16 askari oo boolis ah ayaa la sheegay in lagu dhaawacay, dhowr baabuur oo booliis ahna lagu burburiyay rabshadihii khamiistii, jimcihii iyo sabtidii ka dhacay meelihii kooxda midigta fog ay qorsheynayeen inay kitaabka qur’aanka ku gubaan , sida ay sheegeen xaafadaha Stockholm iyo magaalooyinka Linköping iyo Norrköping.
XIGASHADA SAWIRKA,EPA/SWEDEN OUT
Qoraalka sawirka,Booliiska ayaa kala eryay dad badan oo Sabtidii ku mudaaharaadayay aagga Rosengrad ee Malmo
Paludan ayaa ku hanjabtay in ay isu soo bax kale ku qaban doonto Norrköping Axada, taasoo keentay in dibad baxayaasha ay isugu soo baxaan halkaas, sida ay sheegtay Deutsche Welle.
Booliska deegaanka ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in ay rideen rasaas digniin ah ka dib markii ay la kulmeen weerar waxaana sida muuqata saddex qof ay ku dhaceen bastoolado.
Taliyaha booliska Sweden Anders Thornberg ayaa Sabtidii bayaan uu soo saaray ku sheegay in mudaharaadayaashu ay muujiyeen in aanay dan ka lahayn nolosha askarta booliska, isaga oo intaa ku daray: “Horay ayaan u aragnay rabshado wata, balse tani waa wax kale.”
Boqolkii qarax ee Sweden ka dhacay sanadkan: Sidey wax u jiraan?
Dhanka kale ra’iisal wasaaraha Sweden, Magdalena Andersson, ayaa cambaaraysay rabshadaha ka dhacay dalkeeda iyo weerarrada ka dhanka ah booliska.
“Sweden waxa ay dadka u ogoshahay inay soo bandhigaan arragtidooda, mid wanaagsan iyo mid xun ba. Waa qeyb kamid ah dimuqraadiyaddeena. Wax kasta oo dhaca, ma aha in la horseedo rabshad. Taasi ma aqbali karno,” ayay u sheegtay wakaaladda wararka ee TT.
“Rabshadaha waa waxa uu doonayo (Rasmus Paludan). Waxa uu rabaa inuu iska hor keeno dadka,” ayay hadalkeeda raacisay.
Asasaaha xisbiga Midabada Kala Duwan ee Sweden, Mikail Yuksel, asal ahaana ka soo jeeda Turkiga, ayaa sheegay in booliska ay difaacayaan ninka muujiyay Islaam naceybka.
Waxa uu tilmaamay in Paludan uu had iyo goor ficilladiisa ka sameeyo deegaannada ay Muslimiinta u badan yihiin, gaar ahaan agagaarka masaajidda si uu ku kiciyo dareenka dadka.
Yuksel ayaa intaa raaciyay in booliska ay ugu baaqaan dadka Muslimiinta ah inay is dejiyaan xilli hortooda lagu gubayo Kitaab Quraan ah.
Ma ahan markii ugu horreysay ee ay kooxdaan Kitaabka Qu’aanka ku gubaan Isweden oo Sannadkii 2020, mudaaharaadayaashu waxay dab qabadsiiyeen baabuur, afaafka hore ee dukaamadana waxaa ku waxyeeloobay isku dhacyo ka dhacay Malmö.
Xisbigiisa Stram Kurs
Paludan oo ah qareen Denmark u dhashay ayaa sanadkii 2017 asaasay xisbiga Stram Kurs oo micnihiisu yahay “Xagjir”.
Xisbiga oo ah mid ku dhisan afkaarta Islaam naceybka iyo soo-galooti diidka ayaa isku tilmaama inuu yahay “kan ugu waddanisan Denmark”.
Doorashadii guud ee Denmark ka dhacday 2019, xisbiga Stram Kurs ayaa helay 1.8% codadkii la dhiibtay, taasoo muujinaysay in aanu shacbiyad ku lahayn gudaha waddankaas.
Muuqaal uu sanado ka hor duubay Paludan ayuu waxaa ku jiray qeyb uu ku sheegay inuu jeclaan lahaa in Muslimiinta laga “tirtiro dunida oo dhan”.
Bishii August 2020. Xisbiga Stram Kurs ayaa xaafadda Rosengård ee magaalada Malmö ku qabtay “xaflad Quraan gubis ah”, taasoo dhalisay dibedbaxyo rabshada wata oo hareeyay magaaladaas.
Muslimiinta Sweden ayaa ku baaqay in dastuurka dalkaas lagu daro qodob mamnuucaya aflagaadeynta diimaha, si aanay fursad u helin kooxaha xagjirka ah, sida Rasmus Paludan iyo xisbigiisa Stram Kurs.